UNXUSA AMAKRESTU UKUNGABI NAMAGQUBU NOHULUMENI - Ilanga News
Home Izindaba UNXUSA AMAKRESTU UKUNGABI NAMAGQUBU NOHULUMENI
UNXUSA AMAKRESTU UKUNGABI NAMAGQUBU NOHULUMENI
WENZE isicelo esimqoka kumaKrestu sokuba angalokothi avume ukuhlubuka okholweni ngenxa yemithetho yezwe evimba ukuba agubhe umkhosi wePhasika ngendlela ejwayelekile umbhishobhi welinye lamabandla amakhulu eNingizimu Afrika.
UMbhishobhi uZakhele Khwela (osesithombeni) weReformed St John’s Apostolic Faith Mission, elidume ngelaseChibini, utshele ILANGA ukuthi iPhasika lanonyaka liphonsela amaKrestu inselelo enkulu yokusika iphethini kuJesu, azikhalele ngawodwana kuNkulunkulu kulesi sikhathi esinzima, engaphazanyiswa muntu eceleni njengoba izwe ligonqe izinsuku eziwu-21 ukunqanda ukusabalala kweCovid-19.
“Lesi yisikhathi sokuba wonke umuntu asuke komunye, athathe igxathu elimsondeza kuNkulunkulu, athandaze ngokujulile eyedwa. Amakholwa kakumele nakancane avumele ukulimala emoyeni kulesi sikhathi esimqoka kakhulu sePhasika, sokukhumbula ukuhlushwa kukaJesu, owafela izono zethu.
“Kumele athandazele nohulumeni ukuba uNkulunkulu awusize uhole izwe ngobuqotho, kutholakale nekhambi lalesi sifo. UNkulunkulu akasishayi ngalesi simo, usibuyisela endleleni yakhe.
“Ukuba sendlini yesonto kusuke kungachazi ukuthi sewuthandaza kakhulu, noJesu kunesikhathi abashiya ngaso abafundi bakhe, wathi mabasale betha-ndaza, wayokhuleka eGetsemane ngaphambi kokuba abulawelwe izono zethu,” kusho uMbhishobhi uKhwela.
Ugcizelele ukuthi amaKrestu kumele akhumbule ukuthi uNkulunkulu ukhona kuzo zonke izindawo, nxa umuntu ethandaza ngokweqiniso, uyalela, bese ephendula.
Previous articleumnikazi wejoyinti ubopha amaphoyisa
Next articlekumiswe umshumayeli obanjwe “nenkosazane” edokodweni kwashembe